Sawirro: Garoobna maaha raggoodana ma hayaan - BBC Somali
Sawirro: Garoobna maaha raggoodana ma hayaan
16 Disembar 2013
Garoobna ma'aha raggoodana ma hayaan
Gobolka Kashmir, ee Hindiya ka taliso, waxaa ku nool dumar badan oo ah sida Xaliima Begum oo raggoodii la la'yahay, laakin aan weli la ogayn inay dhinteen iyo in kale
Ninka Tahira Begum, Taariq Axmed ayaan la arag tan iyo sanadkii 2002-da, xilligaas oo uu safar shaqo u aaday caasimadda Hindiya ee Delhi. Haatan waxay ka shaqeysaa goob dumarku isku qurxiyaan, labadeeda wiil-na waxay dhigtaan iskuul looga tala galay carruurta agoomaha ah.
Ninka Raja Begum, Cali Maxamad ayay u dambaysay sanadkii 1999, waxaa uu u baxay inuu hadiyad u soo gado qof qaraabada ah oo aroos galayay. Dib looma arag, waxayna ka raadisay dhamaan xeryaha maxaabiista ee gobolkaas.
Dumarkan nus garoobka ah sida Maymuuna, waxay u ololaynayaan in xal loo helo arrinta dadka maqan. Ninkeeda, Akhdar Xuseen waxaa la la'yahay tan iyo 1999, xilligaas oo la waayay isagoo u safray duugta nin ay saaxibbo ahaayeen.
Jamilah Begum, waxay sheegtay in ninkeeda la la'yahay tan iyo sandkii 1995, xilligaas oo askarta Hindiya ay qabteen. Waxay haatan la nooshahay wiilkeeda oo 23 jir ah, iyo gabadheeda oo 19 sano jir ah.
Ninka Maymuuna Begum, oo ka ganacsan jiray alwaaxa, ayaa la waayay sanadkii 1992. Waxaa u dambaysay maalin uu guriga ka baxay. Waxay haatan haysataa shan carruur ah.